Ntak emi nrọ emi ẹkesuade?
Nrọ maka iko dị ntakịrị nwere nkọwa okpukpu abụọ, ebe ọ bụ n'otu aka, ị nwere ike ibibi ihe mgbochi, yana onye ọzọ, ị ga-efu ihe. Ya mere, ka o wee kọwaa ihe a hụrụ, ọ dị mkpa iburu n'uche ihe omume zuru oke, ihe ndị ọzọ na mmetụta uche.
Ọ bụrụ na ị hụ iko a gbajiri agbaji n'okpuru ụkwụ gị - nke a bụ ihe nnọchianya nke ihe dị adị n'ezie ị chọrọ iji nlezianya chee echiche site na nzọụkwụ ọ bụla. Gaa ma nụ crunch nke iko agbaji - ihe ịrịba ama na ị mere mkpebi na-ezighị ezi, ihe agaghịkwa enwe ike idozi ya. Ịhụ na nrọ ụlọ nke windo na windo agbajiri bụ ịdọ aka ná ntị na n'oge na-adịghị anya ị ga-achọ ịrụ ọrụ siri ike, dozie adịghị ike nke ndị ọzọ. Maka nne na nna, nrọ ahụ ga-agwa gị na ụmụaka nwere ike ime ọtụtụ ihe, nke ha ga-eme.
Ọ bụrụ na ị hụ iko a gbajiri agbaji n'ụlọ gị, mgbe ahụ ị kwụsịrị ikwekọrịta ma chee na echeghị ya. Maka ndị di na nwunye, nrọ na-ekwe nkwa ịgba alụkwaghịm. Ịhụ iko mebiri emebi na nrọ ma belata ya - ihe ịrịba ama na ọrụ a ga-enwe ekele ma ndị mmadụ gburugburu ga-enwe obi ụtọ maka gị. Ihe iko ajuju ajuju bu ihe nnochi nke bu eziokwu na n'uzo iji mezuo ihe mgbaru ọsọ i ga-ezute ihe mgbochi. Ọ kacha mma ka ị chee ụzọ gị tupu ị gafee ọnyà niile.
Ịnakọta iko agbajiri agbawa na nrọ bụ ihe nnọchianya nke ahụ mgbe ị na-agbalị ịnweghachite ihe ndị furu efu, ị na-etinye ahụike gị na ndụ aka. Ọ kachasị mma ịmalite mgbalị nile iji nweta ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ, ọ bụghị iji weghachite ndị agadi.
Gịnị kpatara nrọ nke ịmeghe iko na nrọ?
Ọ bụrụ na ị mebiri iko ahụ na mberede, mgbe ahụ, n'eziokwu, ikpe ahụ, nke ị na-etinye ike na mmetụta uche dị ukwuu, nwere ike ịda. Onye ntụgharị okwu nrọ na-atụ aro ka ọ dị mma dị ka o kwere omume n'omume ya. Ọ bụrụ na ị na-ahụ nrọ nke ị na-agafe na iko mebiri emebi na windo - ihe ịrịba ama na n'ọdịnihu dị nso ọchịchọ gị nwere ike mezuo.
Bọbụ mmiri - ihe ịrịba ama
Ntak emi nrọ nnu?
Kedu ihe nrọ ahụ banyere?
Na-eche ụkwụ aka ekpe - ihe ịrịba ama
Gịnị mere elekere ahụ ji akwụsị mgbe mmadụ nwụrụ?
Kedu ihe mere anyị nwere mushrooms?
Ihe ịrịba ama iji mee ego
Ihe ngosi nke Atọ n'Ime Otu
Salad na mkpụrụ osisi pine na ọkụkọ
Olee otú Atọ n'Ime Otu si eme ememe na Russia?
Kedu ka esi amata ọrịa obi?
Masks maka ihu site na otutu
Ihe mgbochi maka ụmụaka
Ntughari nke vertebrae nke mpaghara lumbar
Na-ekiri Jay Zi ekworo n'ihu ọha n'ebe onye omempụ a ma ama Hollywood a ma ama
Kedu esi eme ka ugu si akwukwo?
Enwere m ike iri unere na nri?
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ-Summer 2014
Knife maka nri
Okirikiri okporo ígwè Somiki
Nkà na nkume
Paris Hilton mara ọkwa na ya na ezi ya n'anya bụ Chris Zilka gbara aka ma gosipụ mgbanaka ahụ